कोरोना भाइरस हावामा पनि जीवित रहन सक्छ – Karnalikhabar
कोरोना भाइरस हावामा पनि जीवित रहन सक्छ
एजेन्सी, १० चैत । कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ हावामा बाच्न सक्ने एक अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । हावामा बाच्न सक्ने भन्ने पुष्टि पनि भइसकेको छ । कोभिड–१९ हावामा पनि बाच्न सक्ने पत्ता लागेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मेडिकल स्टाफका लागि यसका सावधानीहरूकोबारेमा साेच बनाएकाे छ ।
डाक्टर मारिया भान करखोभका अनुसार भाइरस तरल पदार्थको थोपाहरुमार्फत सर्न सक्ने छ भने हाछ्यौ गर्दा र खोक्दा यो भाइरस सर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ । जव मानिसहरुले एयरोसोल उत्पादन गर्ने प्रक्रिया जस्तै मेडिकल केयर सुविधाहरुमा गर्छन । ती कारणले एयरोसोलिज भन्ने सम्भावना हुन्छ । जसको कारण तिनीहरु हवामा अलि बढी रहन सक्ने उनले बताइन्।
काम गर्ने समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरुले थप सावधानी अपनाउनु धेरै आवश्यक रहेको उनले बताइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्छेहरुले हछ्यौ गर्दा र खोक्दा निस्कने थोपाहरु कुनै पनि वस्तुमा पर्दा भाइरस सर्ने बताइएको छ । अहिले कोरोना भाइरस कस्तो ठाउँमा र तापक्रममा हुने र कती समयसम्म भाइरस बाच्ने भन्नेबारे पनि पत्ता लागिसकेको जनाइएको छ ।
अघिल्लो - ‘लकडाउन’ के हो ? उल्लंघन गरे के हुन्छ सजाय ?
वृद्धवृद्धालाई घरभित्रै सुरक्षित राख्न विज्ञको सुझाव - पछिल्लो